Mbuynow, ၃၅.၉၉ ဒေါ်လာဖြင့်အကောင်းဆုံး HD IP ကင်မရာ Androidsis
Francisco Ruiz | | အခြားကိရိယာများ, reviews
ယခုအပတ်မှာထုတ်ကုန်များအကြောင်းပါ Mbuynow ပါ, ငါဒီလိုင်းများအထက်ပဲအကြံပြုထားတဲ့ Apple Airpods နားကြပ်အပြင်, ကြိုးစားခဲ့ဖို့အလွန်ကြီးစွာသောဂုဏ်အသရေရှိသည် စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ HD IP ကင်မရာကိုကျွန်တော်တကယ်ချစ်ခဲ့တာပါကျွန်ုပ်သည်မိနစ် ၂၀ ကျော်ကြာသောဗီဒီယိုပြန်လည်သုံးသပ်မှုကိုကျွန်ုပ်တည်းဖြတ်နေသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်သည် Youtube သို့တင်ပို့ပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်သည်ဤအပုဒ်တွင်ပင်ပါ ၀ င်မည်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းကိုတင်ပို့ရန်စောင့်ဆိုင်း။ မရပါ။ ဤသည်ထုတ်ကုန်အလွန်အလွန်ကျိုးနပ်သော။
အကယ်၍ သင်သည်သင်၏အိမ်ကိုစောင့်ကြည့်ရန်အတွက်ကောင်းမွန်သော IP ကင်မရာကိုရှာဖွေနေပါက Mbuynow IP HD Camera သည်ကျွန်ုပ်တို့အားoffersကန်အမှန်ကတည်းကပေးထားသောအရာအားလုံးကိုကြည့်ရှုရန်သင့်အားအကြံပေးသည်။ သင်သည်၎င်းကိုအလွန်အမင်းထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားစေမည် ဖြစ်၍ သင်၏ Amazon ကိုယူရို ၃၅.၉၅ ဖြင့်သာရနိုင်သည်ဟုသင်မယုံနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်သွားသည်။
Mbuynow IP HD ကင်မရာကကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသည်
ကင်မရာ setup ကိုလွယ်ကူသည်။
IP ကင်မရာသည်အလျားလိုက်လှည့်ပတ်အကွာအဝေး ၃၅၅ ဒီဂရီနှင့် ၈၀ ဒီဂရီရှိပြီး ၃၆၀ ဒီဂရီမြင်ကွင်းကျယ်မြင်ကွင်းကိုရရှိရန်သင်၏အိမ်တွင်သင်မရှိခြင်း၌ဖြစ်ပျက်နေသည့်အရာများကိုမဆုံးရှုံးစေရန်ဖြစ်သည်။
2.4Ghz LAN နှင့် Wifi ဆက်သွယ်မှု (5G Wifi ကွန်ယက်များနှင့်သဟဇာတမဖြစ်)
HD, SD သို့မဟုတ်အလိုအလျောက်အသုံးစနစ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းအရည်အသွေး။
ရွေ့လျားမှုအာရုံခံကိရိယာနှင့်မိုဘိုင်းသို့တိုက်ရိုက်သတိပေးချက်များပါသော push သတိပေးချက်များဖြစ်သည်။
Built-in စပီကာသည်လျှောက်လွှာမှတဆင့်ခလုတ်ကို နှိပ်၍ ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
Android နှင့် iOS အတွက်ရည်ရွယ်သည့် application မှတစ်ဆင့် IP ကင်မရာကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ဘယ်ဘက်၊ ညာ၊ အပေါ်၊ အောက်၊ ချုံ့၊ ချဲ့နိုင်သည်၊ အကွာအဝေးမှဓာတ်ပုံရိုက်နိုင်သည်သို့မဟုတ်အဝေးမှဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။
ဒီ post ရဲ့အစမှာသင့်မှာဗီဒီယိုပြန်လည်သုံးသပ်မှုတစ်ခုလုံးရှိတယ် ဒီယူရို ၃၅.၉၅ ပဲရနိုင်ပါတယ်. ငါကသင်အရောင်များနှင့်အတူကဝေးမှုတ်သွားကြသည်ကိုသင်အာမခံနိုင်ပါတယ် !!
ရောင်းရန်မကုန်မှီ (သို့) သူတို့ရောင်းမရောင်းမီဤနေရာတွင်ယူရို ၃၅.၉၅ ဖြင့်သာဝယ်ပါ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » reviews » Mbuynow, အကောင်းဆုံးယူရို ၃၅.၉၉ ဖြင့်အကောင်းဆုံး HD IP ကင်မရာကို ၄၀% လျှော့စျေးဖြင့်သင် ၂၄ ဒေါ်လာသက်သာသည်
Mbuynow Touch TWS၊ ၃၃% လျှော့စျေးဖြင့် ၂၃ ယူရို ၃၆.၉၉ သာ ပေး၍ နားဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။